နှင်းဝေ – Hlataw.com
“ ကျွီ ”ကနဲ ကားဘရိတ် ဆွဲသံရှည်ကြီးက ထွက်ပေါ်လာပြီးခဏတွင် သူ့ကိုယ်သူ အနိုင်နိုင်သယ်ကာ လမ်းဖြတ်ကူးလာသော သူသည်ကားရှေ့မှာပင် မှောက်ရက်လဲပြီး ကျသွားလေသည်။ နှင်းဝေ တစ်ယောက်ကမန်းကတမ်းကားပေါ်မှဆင်းလိုက်ရင်း ထိုသူအနားသို့ ရောက်သွားလေသည်။ ကားမီးရောင်အောက်တွင်မှောက်ရက်လဲနေသော သူ့ကို နှင်းဝေ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး မှ စိတ်ထဲတွင်စိုးထင့်ကာသွားလေသည်။ နောက်တဖန်သေချာအောင်ကြည့်လိုက်မိမှ နှင်းဝေ တစ်ယောက် အံ့သြတုန်လှုပ်ကာသွားလေသည်။ ထိုစဉ်တွင် ပလက်ဖေါင်းဆီမှ တဖုံးဖုံးပြေးကာလာနေသောခြေသံများကို ကြားလိုက်ရပြီး ထိုပြေးလာသောလူမှပင် လဲကျနေသော သူ့အားဆွဲကာထူလိုက်လေသည်။ ထိုသူသည် နှင်းဝေ ဖက်သို့လှည့်ကာ ကြည့်လိုက်ပြီး “ဟာ … နှင်းဝေပါလား ” “ ဟင် … ကိုစိန်တင် … ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ? ” “ သူ့ဖာသာသူသွားမယ်ဆိုပြီး လမ်းဖြတ်ကူးသွားတာပဲ …” ထိုသူနှင့် စကားအပြန်အလှန်ပြောရင်း နှင်းဝေ တစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်အနားသို့ ကပ်သွားသည်။ “ သူဘာဖြစ်သွားသေးလဲ ဟင်? ” “ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊အမူးလွန်နေတာပါ ” “ ဒါဆိုရင်လည်း မထူးတော့ပါဘူး … ကိုစိန်တင်ရယ် ကားပေါ်သာတင်ပေးလိုက်ပါတော့ … ” ပြောရင်းမှပင် နှင်းဝေ က အမူးလွန်နေသူကို တဖက်မှဝင်ကာ တွဲလိုက်လေသည်။ “ ကိုစိန်တင်ပါလိုက်ခဲ့ပါလား။
ကျွန်မတစ်ခါတည်း ပို့ပေးခဲ့မယ်လေ ” “ မလိုက်တော့ပါဘူး နှင်းဝေရယ် … နှင်းဝေတို့သာ ပြန်နှင့်ပါ … ” “ကဲ…ဒါဆိုလည်း ကျွန်မသွားတော့မယ် ကိုစိန်တင် ” ကိုစိန်တင်ကခေါင်းငြိမ့်အပြတွင် နှင်းဝေ ကားကလေးကို မောင်းကာထွက်ခဲ့လေသည်။ အိမ်တွင်လည်း မမနွယ် ပြန်ရောက်ဦးမည်မဟုတ်၊ အန်တီကလည်း ပြည် သို့ ခဏပြန်သွားသည်မှာ (၂)ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။အိမ်ရှေ့ပေါ်တီကိုအောက်သို့ ကားရပ်ပြီးနောက် နှင်းဝေ ကားဟွန်းကို လေးငါးချက် အဆက်မပြတ်တီးလိုက်လေသည်၊ တိုက်ကြီး၏ဘေးရှိကားဂိုဒေါင်လေးတွင်နေသော လှမြင့်တို့ လင်မယား ပြေးထွက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။ နှင်းဝေ ကားတံခါးကိုဖွင့်ကာဆင်းလိုက်ပြီး ကားနောက်ခန်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်စဉ်မှာပင် လှမြင့်တို့ လင်မယားနှစ်ဦးစလုံး အနားသို့ရောက်လာကြသည်။ “ ဟင် … အကိုလေးပါလား … ” “ ဟုတ်တယ် … ရှင်တို့အကိုလေးကို ရှင်တို့ပဲတွဲပြီး အခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်တင်ပေးခဲ့ပါဦး … ” ပြောပြီးသည်နှင့် နှင်းဝေက သူမ၏ စလင်းဘက်လေးကိုဖွင့်ကာ အတွင်းမှ သော့ကိုထုတ်ပြီး တံခါးမကြီးကိုဖွင့်လိုက်လေသည်။ လှမြင့်တို့ လင်မယားက မူးနေသော သူ့ကို မနိုင်မနင်းနှင့်တွဲလာကြလေသည်။ အမူးလွန်နေသော သူမှာ တအင်းအင်း တအဲအဲ နှင့် ဖြစ်နေလေသည်။စောစောကလိုတော့ သတိလစ်ကာမနေတော့၊သူ့ကို ခုတင်ပေါ်သို့ တင်ပေးပြီးသောအခါ “ ကဲ … ရှင်တို့ တာဝန်ကျေကြပါတယ်၊ပြန်အိပ်ကြပေတော့ … ” ဟု နှင်းဝေ ကပြောလိုက်ပြီး ခပ်ကုပ်ကုပ် ထွက်သွားသော လင်မယားနှစ်ယောက်အနောက်မှလိုက်ကာ အိပ်ခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်သည်။
နှင်းဝေ တစ်ယောက်အဝတ်အစားလဲပြီးသောအခါ ဧည့်ခန်းဖက်သို့ ထွက်လာ ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေခဲအိတ်ကိုရှာပြီး ရေခဲတုံးလေးများအားအိတ်အတွင်းသို့ ထည့်ပြီးအိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ပြန်ဝင်လာခဲ့လေသည်။ခုတင်ပေါ်တွင်ရှိသော အမူးလွန်သူကား တလူးလူးတလွန့်လွန့် ဖြစ်ကာနေချေသည်။သို့သော် မျက်စိကားမပွင့်သေး။ ထိုသူ၏နဖူးကို ရေခဲတင်ပေးရန် ကြံရွယ်လိုက်စဉ်မှာပင် ထိုသူသည်နှစ်ယောက်အိပ် ခုတင်ကြီး၏အလယ်တွင်ဖြစ်နေသဖြင့် နှင်းဝေ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်း ခုတင်ကြီးပေါ်လှမ်းကာတက်လိုက်လေသည်။ထိုသူ၏နဖူးပေါ်သို့ ရေခဲအိတ်ကို အသာအယာတင်လိုက်ပြီး အိပ်ခန်းအတွင်းရှိ နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ည(ဂ) နာရီကျော်ကျော်သာရှိသေးသည်။ ဒီအတိုင်းဆို မမနွယ် ပြန်ရောက်မည့်အချိန်မှာ ဝေးသေးသည်။ မနေ့ညကလည်း သန်းခေါင်ကျော်မှပြန်ရောက်လာသည်။ ခုတင်ပေါ်တွင် အမူးလွန်နေသော မြသိန်း တစ်ယောက် အသိအာရုံထဲတွင်သိသလိုလို မသိသလိုလို ဖြစ်နေလျက် ခေါင်းထဲတွင် အုံခဲကာနေလေသည်။ သူ၏အသိကို စုစည်းနိုင်သောအချိန်တွင် ပထမဆုံးသိလိုက်ရသည်က သူ၏နဖူးပေါ်တွင်အေးစက်နေသော ရေခဲအိတ်၊ ပြီးတော့ အိစက်ညက်ညောသော အတွေ့အထိ၊ မွှေပျံ့သင်းကြိုင်သော ရနံ့ စသည်တို့ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ကြုံတွေ့ခံစားလိုက်ရလေသည်။မြသိန်းသည် ခဏတာမျှငြိမ်နေလိုက်ပြီးနောက် သူ့မျက်လုံးများကို အားယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်လေသည်။
“ ဟင် အကို … သတိရလာပြီလား? ” လှိုက်မောပုံရသော တုန်ခါနေသည့်အသံလေး၊ ဒီအသံအဆုံးတွင်တော့ မြသိန်း၏ မျက်လုံးများပြန်မှိတ်ကာသွားလေသည်။ မြသိန်းတစ်ယောက် စကားစုများကိုကြားနေရသည်မှာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေသည်။သူနှင့်စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်သဖြင့် ခွဲခွာနေသောသူ၏ ဇနီးအလှ ဝေ၀ ၏ချစ်စဖွယ် နှုတ်ခမ်းလှလှလေးများမှ ထွက်ပေါ်လာသော စကားစုများပင်ဖြစ်လေသည်။ ဝေ နှင့် မြသိန်းတို့ စိတ်သဘောထားချင်းမတူညီကြပဲ သဘောကွဲကြသည်မှာလည်း အခြားမဟုတ်၊ ဝေ သည် ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ဘာမဆို သူ့ခြေသူ့လက် လုပ်ကိုင်တတ်သောညဉ်ရှိသူပီပီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်စင်ခွဲထောင်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါတွင် လုပ်ငန်းသဘောအရ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု၊ လူမှုရေးတွေက ဝင်လာတော့သည်။ ကျောင်းသူဘ၀ထဲကပင် ယောင်္ကျားလေးအပေါင်းအသင်းများ ရှိခဲ့ တွဲခဲ့သော ဝေ သည် ကိုယ်တိုင်အလုပ် လုပ်လာပြီဆိုတော့ ယောင်္ကျားများနှင့် ရဲဝံ့စွာပင် တန်းတူရင်ဘောင်တန်းကာဆက်ဆံလာခဲ့သည်။ ခဏတာ ကာလအတွက်တော့အကြောင်းမဟုတ်၊ ကြာရှည်လာတော့ မြသိန်း၏စိတ်တွင် ဝေ သည် ယောင်္ကျားတွေကိုလိုသည်ထက်ပိုပြီးဆက်ဆံနေသည်ဟု မြင်လာသည်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မြသိန်း သတိပေးခဲ့သည်။ ဝေ ကလည်းလုပ်ငန်းအကြောင်းကို အရင်းခံကာ ဆင်ခြေတွေပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ပြောမိစဉ်တွင်တော့ ဝေ ကလည်း မြသိန်း ကို စိတ်မရှည်တော့သဖြင့်လား မပြောတတ်၊ ပြန်လှန်ကာအချေအတင် စကားများခဲ့ကြသည်။ မြသိန်းလည်း အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားခဲ့ပြီး စိတ်လေကာနေခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းတွေကို သူ၏လက်ထောက်ဖြင့် လွှဲထားပြီး အရက်ချည်းဖိသောက်ကာနေလေသည်။ ယခုတော့ မြသိန်းတစ်ယောက် သူ၏ချစ်ဇနီး ဝေ နှင့် ချစ်ရည်လူးခဲ့သော ဖဲမွှေယာထူကြီးထက်သို့ ပြန်ရောက်ကာနေလေသည်။ ချစ်ဇနီးကလည်း သူ့ ကို ကြင်ကြင်နာနာနှင့် ပြုစုကာနေသည်။ မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်သောကြောင့်လားမသိ၊ မြသိန်း၏စိတ်ထဲတွင် ဝေ ၏ ရွှေရင်နှစ်ခိုင်မှာ ခါတိုင်းထက်ကျစ်လစ်နေသည်ဟုထင်ရသည်။ တီရှပ်အကျပ်အဖြူလးကို ဝတ်ထားသဖြင့် ရင်ဘတ်တွင်အသီးလေးတွေမှာ အတိုင်းသားထကာနေလေသည်။ကာမအရသာဖြင့် ပြတ်လာတာကြာပြီဖြစ်သော မြသိန်း၏ရမ္မက်ဆန္ဒများသည် ဟုန်းကနဲထကာလာရချေပြီ၊ မြသိန်း ၏ အကြည့်စူးစူးတွေကြောင့် နှင်းဝေ လည်းမျက်လွှာချကာ နေရလေသည်၊ သူမကိုကြည့်နေရင်းကပင် မြသိန်းသည် ပက်လက်အနေအထားမှ သူ၏ဒူးတစ်လုံးကို ဆွဲကာထောင်လိုက်လေသည်။မြသိန်း၏ အကြည့်များကား နှင်းဝေ၏ သေးကျင်သော ခါး ဆီသို့ ရာက်သွားပြန်၏။
ထဘီလေးကို ကပိုကရို ဝတ်ထားသော်လည်း ထိုသေးသောခါးအောက်တွင်ရှိသော မို့မောက်ကာဖေါင်းကားနေသော တင်သားတို.၏ အလှကိုကားမဖုံးကွယ်နိုင်ပေ၊နှင်း ဝေ သည် ပဆစ်တုပ်ကာထိုင်နေခြင်းကြောင့် ဆင်စွယ်ပမာ အရင်းတုတ်ပြီးအဖျားသို့ သွယ်ဆင်းလာသော လှပလွန်းသည့် ပေါင်တံ နှစ်ချောင်းကို အထင်းသား တင်းတင်းပြောင်ပြောင် မြင်နေရသည်။ မြသိန်းသည် သက်ပျင်းတစ်ချက်ကို ခပ်မျှင်းမျှင်းချလိုက်ရင်း အပြုံးချိုချိုဖြင့် သူ့အား ပြုစုနေသည့် ချစ်ဇနီးချောလေးအား အတိုးချကာ ချစ်စခန်းဖွင့်တော့မည်ဟု အရက်ရှိန်နှင့်ရမ္မက်သွေးရှိန်ရောကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေသည်။ ​ ထိုအချိန်မှာပင် နှင်းဝေ ကလည်း သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို မြသိန်း ဖက်သို့ ကိုင်းကာ လက်တစ်ဖက်ကို ဆန့်ကာ မြသိန်းနဖူးပေါ်မှ ရေခဲအိတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်လေသည်။ အခုအခံ အစည်းအနှောင်မပါသော ရင်သားစိုင်နှစ်ခု မြသိန်း ၏ မျက်နှာရှေ့နားတွင် သိမ့်ကနဲလှုပ်ရှားစဉ်မှာပင် မြသိန်း ၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ခါးကလေးကိုဖက်ကာ နှင်းဝေ ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဆတ်ကနဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်သို့ဆွဲယူလိုက်ရာ ​ “ အို … အကို …” ဟူသောအထိတ်တလန့် အသံလေးဖြင့် နှင်းဝေ မှာ မြသိန်း၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ ပြိုလဲကာကျလာလေသည်။ ထိုကဲ့သို့ မြည်တမ်းပြီးနောက် နှင်းဝေ ၏နှုတ်ဖျားမှ နောက်ဆက်တွဲ စကားများထွက်မလာတော့။ သူမ၏ နီတျာတျာ နှုတ်ခမ်းအစုံသည် မြသိန်း၏ နှုတ်ခမ်းတွေကြားရောက်ကာသွားချေလေပြီ။ မြသိန်း ၏လက်တွေက ငြိမ်မနေဘဲ အခုအခံမဝတ်ထားသော သူမ၏ရင်သားနှစ်မွှာကို တီရှပ်ပေါ်မှ အသာအယာဆုပ်နယ်ဖျစ်ညှစ်ပေးနေသည်။
ခါတိုင်းထက်ပင် လုံးကျစ်ကာ မာတင်းနေသော ရင်နှစ်မွှာ၏အတွေ့ထူးကြောင့် မြသိန်း ၏လက်တွေက နှင်းဝေ ၏ တီရှပ်အတွင်းသို့ တီရှပ်၏အောက်ဖက်ဆီမှ လှမ်းလိုက်လေသည်။ နှင်းဝေ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိုကျူးကျော်လာသော မြသိန်း၏လက်ကို ကမန်းကတမ်းဖယ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမမှီလိုက်တော့ပါ၊ ရင်နှစ်မွှာကိုသိမ်းပိုက်ရန် အပေါ်သို့ဆန်တက်သွားသော မြသိန်း ၏လက်ဖဝါးများက သူမ၏နူးညံ့လှသော ဝမ်းဗိုက်သားနှင့်တကွ နံစောင်းများကို လျောတိုက်သွားရာ တစ်ကိုယ်လုံး ဖျင်းကနဲ ကြက်သီးထသွားရသော နှင်းဝေ၏ ခါးကလေးမှာတွန့်ကာတက်သွားလေသည်။ မျိုးမတူသော ဖို နှင့် မ ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေ့အထိကြောင့် နှင်းဝေ ၏ နုထွေးသောအသားစိုင်များမှာ ဆူပူကာလာပြီး တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်း နုံးခွေကာသွားလေသည်။ မြသိန်း၏ လက်က လုံးကျစ်ပြီးတင်းနေသော သူမ၏နို့အုံလေးများကို ညင်သာစွာ ဆုတ်ညှစ်ပေးရင်းကပင် သူမ၏ နိုးသီးခေါင်းလေးများကိုလည်း လက်ဖဝါးထိပ်လေးဖြင့် ဖွဖွလေးပွတ်ပေးခြင်း၊ လက်ဖဝါးထဲထည့်ကာ လှိမ့်ပြီးပွတ်ပေးခြင်း တို့ကို ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပင် လုပ်ပေးနေရာ မြသိန်း၏ နှုတ်ခမ်းချင်းငုံကာ စုတ်ယူပေးနေသောအပြုအစုများကြားမှ ရုန်းမထွက်နိူင်ဖြစ်နေသော နှင်းဝေခမျာ ကျောကော့လိုက်၊ ခါးတွန့်လိုက်ဖြင့် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသလို နှင်းဝေ ၏ စိတ်ထဲတွင်လည်း မရိုးမရွဖြစ်ကာ ရမ္မက်သွေးများ ဆူပွက်ကာတက်လာနေလေသည်။
မိန်းမနှင့်တစ်လကျော်ကြာအောင် ခွဲခွာနေခဲ့ရသော မြသိန်း မှာတော့ ငံ့လင့်ကာနေခဲ့ရသော နေ့ရက်များတွင် မျိုသိပ်ကာနေခဲ့ရသော သူ၏ဆန္ဒများကိုလက်တွေ့ပေါက်ကွဲခွင့် ရနေပြီဖြစ်သဖြင့် ပြောမပြနိူင်သော အရသာထူးကို အပီအပြင် ခံစားကာနေလေသည်။ နှင်းဝေ၏ နို့နှစ်လုံးကို သုံးသပ်ကာ ကစားနေသော မြသိန်း ၏လက်သည် သူမ၏ခါးဆီသို့ ရောက်ကာသွားလေသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ကျောပြင်ပေါ်က လက်ကိုရော၊ ခါးပေါ်ကလက်ကိုပါ နှင်းဝေ ၏ ကိုယ်လုံးကျစ်ကျစ်လေးကို တင်းကြပ်စွာ ရစ်သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ပက်လက်လှန်လှဲချလိုက်လေသည်။ နှင်းဝေကျောပြင် မွှေ့ယာပေါ်သို့ ထိကပ်မိသည့်အချိန်တွင် မြသိန်း၏ နှုတ်ခမ်းတွေက နှင်းဝေ နှုတ်ခမ်းလေးများကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲတွင်ထွန်းထားသော ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ စားပွဲတင် စာကြည့်မီးလုံး၏အလင်းရောင်အောက်တွင် နှင်းဝေ မျက်နှာလေးကို အာသာငမ်းငမ်းဖြင့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ နုငယ်လှသော နှင်းဝေ မျက်နှာလေးသည် ပန်းသွေးရောင်ထနေပြီး မျက်လုံးအစုံကိုကားမှိတ်ထားလေသည်။ မြသိန်း၏ နှာခေါင်းက နှင်းဝေ ၏ပါးပြင်အနှံကိုဖိကပ်ကာသရမ်းခြင်းအမှုကို ပြုလေသည်။ ပြီးတော့ ဝင်းမွှတ်နေသော နှင်းဝေ၏ လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကို မြသိန်း နှုတ်ခမ်းအစုံက ဖိကပ်ကာစုပ်နမ်းလိုက်ချိန်တွင်မတော့ နှင်းဝေ မျက်နှာဖွေးဖွေးလေးမှာ မော့တက်ကာသွားလေသည်။
ထိုမှတဖန် မြသိန်း သည် နှင်းဝေ တီရှပ်ကို အပေါ်သို့ လှန်တင်လိုက်ရာ တုန်ကာလှုပ်ကာဖြင့် ထွက်ကျကာလာသော နှင်းဝေ ရင်သားနှစ်မွှာမှာ အပျိုရှုံးလောက်အောင်ပင် လုံးဝန်းမာတင်းကာနေလေသည်။ ထိုအမြင်ကြောင့် မြသိန်း မှာ စိတ်ပိုထလာပြီး နှင်းဝေ ၏ နို့တစ်ဖက်ကိုငုံကာ နို့သီးလေးကို ပြွတ်ကနဲနေအောင် စုပ်ယူလိုက်လေသည်။ ​ “ အို အကို … ဟင့် ဟင့် … အင်း ” နှင်းဝေ၏ ရင်ဘတ်ကလေးမှာ ကော့ကာတက်သွားပြီး နှုတ်ဖျားမှလည်း ငြီးညူသံလေး မပွင့်တပွင့်ထွက်အံလာခဲ့သည်။ မြသိန်း လက်တစ်ဖက်က ကျန်နေသော သူမနို့အုံလေးတစ်ဖက်ကိုအုပ်ကာဆုပ်နယ်ပေးနေသလို နို့သီးလေးခေါင်းလေးတွေကိုလည်း ချေမါကှာပေးနေလေသည်။ နှင်းဝေ ပေါင်တံ နှစ်ချောင်းမှာ လိမ်ကာသွားလိုက် ကားသွားလိုက်ဖြင့် ခံစားရအတော်ခက်နေပုံရလေသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် ရမ္မက်သွေးဆူဝေစွာဖြင့် မြသိန်း လှန်ကာတင် ထားသော တီရှပ်သည် နှင်းဝေမေးဖျားအထိဖုံးနေလေရာ နေရထိုင်ရအတော်ခက်လာသော နှင်းဝေ သည် တီရှပ်ကိုသူမ၏ဦးခေါင်းမှဆွဲကာ ချွတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ နှင်းဝေ ရင်သားနှစ်ဖက်ကို တစ်လှည့်စီစို့လိုက် ဖျှစ်ညှစ်လိုက်ဖြင့် အလှုပ်ရှုပ်နေသော မြသိန်းသည် ဆက်လက်စောင့်စားနိုင်တော့သဖြင့် လက်တစ်ဖက်က သူဝတ်ထားသော ရှပ်အင်္ကျီကြယ်သီးများကို အလျင်စလိုဆွဲဖြုတ်နေသလို ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကားကားလေးဖြစ်နေသော နှင်းဝေပါင်တံလေးများခွဆုံရှိ ဖုဖေါင်းကာနေသောနေရာကို။
ထဘီပေါ်မှ ဖွဖွလေးအုပ်ကိုင်လိုက်လေရာ….. “ အ… ကို … အို …အို ” နှင်းဝေ ၏ကိုယ်လေးမှ ထွန့်ထွန့်လူးသွားရလေသည်။သူမ၏ ရတနာရွှေကြုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကလေးကိုအုပ်ကိုင်ထားသော မြသိန်း ၏လက်တွေက ငြိမ်ငြိမ်မနေပဲ ဖိလိုက်၊ဆုပ်လိုက်၊ဖျစ်လိုက်၊ ညှစ်လိုက် လုပ်နေသည်။ မြသိန်းက နှင်းဝေ မျက်နှာလေးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အပျိုဖြန်ုမလေးတစ်ယောက်ပမာ မျက်လုံနှစ်လုံးကိုမဖွင့်ပဲ စုံမှိတ်ကာထားပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုဖိကိုက်ကာထားလေသည်။ မြသိန်းသည် သူ့ရှပ်အင်္ကျီကျွတ်သွားသည်နှင့် နှင်းဝေ ၏ထဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်လေရာ ​ “အို … အကို … မလုပ်နဲ့လေ ” ကြောက်လန့်တကြားဖြင့် နှင်းဝေ လက်များက သူမ၏ထဘီကို လှမ်းဆွဲပါသေးသည်၊ ဒါ့အပြင် ထဘီကျွတ်ထွက်သွားမည်ကို ဟန့်တားလိုသော သဘောဖြင့် သူမ၏ဒူးနှစ်ဖက်ကို တပြိုင်တည်း ထောင်လိုက်သေးသည်။ သို့သော်လည်း လှုပ်ရှားလူးလွန့်သွားသောသူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကြောင့် ဖင်သားကြီးများကို ကြွပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ထမိန်လေးမှာမြသိန်းလက်ထဲ ပါသွားရှာသည်။ “ ကျွတ် …” စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် နှင်းဝေခမျာ မျက်လုံးနှစ်လုံးအားစုံမှိတ်ထားရင်းကပင် အောက်နှုတ်ခမ်းကိုမကျေမနပ်ဖြင့်ကိုက်ထားလိုက်သေးသည်။ ထဘီ ဆွဲချွတ်သည်ကို တွန့်တိုနေရှာသော သူမဖြစ်အင်ကိုကြည့်ကာ သူနှင့်ချစ်ရည်လူးခဲ့စဉ်က ဒီလိုပင်အထိတ်တလန့်ဖြင့် တွန့်တိုတတ်သည်ကို သွားသတိရကာ ဇနီးဖြစ်သူ ဝေ တစ်ယောက် ငယ်မူငယ်သွေးတွေ ပြန်ဝင်နေပြီဟု မြသိန်း ကျေနပ်စွာတွေးလိုက်မိသည်။
ထဘီကွတ်သွားပြီဆိုတော့ မြသိန်း အကြည့်စူးစူးတွေက သူမ၏ ရတနာရွှေကြုတ် ဆီမှ လုံးဝမခွာတော့၊ ယခင်က အမွှေးနက်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသော ဝေ ရတနာရွှေကြုတ်လေးက အခု အမွှေတစ်ပင်မျှမရှိပဲ ဖြူဖွေးတင်းမာကာ မုန့်ပေါင်းအလား မိုဖေါင်းနေပါလားဟု မြသိန်း တွေးမိသည်။ သူပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ရင်း သူ၏လက်များက နှင်းဝေ အကွဲကြောင်းတစ်လျေက် ရွရွလေး ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ဒူးနှစ်ဖက်လုံးထောင်ထားသော နှင်းဝေ ခြေဖျားနှစ်ဖက်မှာ အတန်ငယ်ဘေးသို့ ကားသွားသည်။တစ်ဖန် သူ၏ မာတောင်နေသော အတံကြီးကို နှင်းဝေ အကွဲကြောင်းတစ်လျောက် စုန်ချည်ဆန်ချည် ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ကားအယ်ဖြူဖွေးလှသော နှင်းဝေ ၏ဖင်သာကြီးမှာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှာဖြစ်လာရလေသည်။ အဲဒီနောက် မြသိန်းက သူမ၏ စိကပ်ကာ ဖေါင်းထနေသော နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို လက်ညှိုး လက်မတို့ဖြင့် အသာလေးဖိကာ ဖြဲလိုက်သည်။ ​ “ အား … ကျွတ် … အို …” နှင်းဝေ ညည်းသံလေးထွက်လာသည်။သည်လိုဖြဲလိုက်တော့ ထင်ထင်ရှားရှားထွက်ပေါ်လာသော သူမ၏ အစိလေးကို သူ၏အတံထိပ်ဖူးဖြင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးပေးလိုက်သည်။ “ အို … အမေ့ … အင့် … အ အ…အား …” နှင်းဝေ ဝင်းဝင်းဝါဝါ ကိုယ်လုံးတီးလေးမှာ လူးလွန့်လှုပ်ရှားသွားရလေသည်။ နှင်းဝေ တစ်ယောက်ထူးခြားလှသည် ခံစားချက်ကြောင့် တိမ်ပေါ်ပျံတက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရလေသည်။ထိုစဉ်မှာပင် မြသိန်းလက်ဖြင့် ဖြဲထားသောကြောင့် နီရဲကာနေသောသူမ၏အခေါင်းအတွင်းမှ ချစ်ရှေ့ပြေး အရည်ကြည်များ တစ်စိမ့်စိမ့်ထွက်လာလေသည်။
မြသိန်း လက်တစ်ဖက်က နှုတ်ခမ်းသာဖေါင်းဖေါင်းလေးကို ဖြဲထားရင်း သူမ၏ ဂူဝသို့ သူ၏ထိပ်ဖူးကိုတေ့ကာ အသာဖိပြီးသွင်းလိုက်လေသည်။ “ အို … အို … အား … ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် သေပါပြီ အကိုရယ် …” ​ ထိုးနေကျ တွင်းဖြစ်သဖြင့် မြသိန်း မညှာတော့ပဲ တစ်ဆုံးထိုးသွင်းလိုက်ရာ ကျဉ်းမြောင်းကျပ်တည်းစွာ ၀င်သွားသည်။ခံစားချက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာ ပိုထကြွလာပြီး လေး ငါး ချက်လောက် ဇွတ်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ နှင်းဝေကိုယ်လုံးလေးမှာ အတော်ပင်ကော့တက်လာကာ မှိတ်ထားသော သူမ၏မျက်ခွံလေးများအောက်မှ မျက်ရည်များစိမ့်ထွက်ကာလာလေသည်။ နှင်းဝေ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်က တင်းကြပ်စွာ မြသိန်း ဒုတ်ချောင်းကို ညှပ်ထားပြီး ဆွဲဆုပ်ထားသလိုဖြစ်နေသဖြင့် ကျပ်ထုပ်သည့်အရသာကို မြသိန်း မြိန်ယှက်စွာ ခံစားနေရသည်။ပြီးတော့မှ ရှုံမဲ့နေသော နှင်းဝေ မျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်ရင်း ဝေ သည်လည်း သူနှင့်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်သောကြောင့် အသစ်အဆန်း သဖွယ် ဖြစ်နေတာ နေမှာပါ ဟူသောအတွေးဖြင့် သူမအခေါင်းလေးထဲမှ သူ၏အတံကြီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး တစ်ဝက်လောက်အရောက်တွင် ခပ်သာသာလေးဆောင့်ကာ ထိုးထည့်လိုက်ပြန်သည်။ပြီးတော့ မြသိန်း၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ရင်နှစ်မွှာကိုတစ်လှည့်စီဆုပ်နယ်ပေးကာ နို့သီးခေါင်းလေးများကို ချေမွပေးနေသလို လက်တစ်ဖက်ကလည်း သူမ၏ ဆီးခုံ၊ပေါင်တံများတစ်လျောက်ကိုလက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။
တစ်ချက်ချင်းဆောင့်ကာနေသော မြသိန်း အင်္ဂါသည် သူမ၏အခေါင်းအတွင်းမှ ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက် ဖြစ်သွားတိုင်း ချစ်အရည်ကြည်များကလည်း ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲထွက်လာလေသည်။ထိုသို့ လုပ်ရင်းမှပင် အားမရနိုင်ဖြစ်လာသော မြသိန်း သည် သူ၏ထိပ်ဖူးကို အပြင်ရောက်သည်အထိ ဆွဲထုတ်ပြီး နှင်းဝေ အပါက်လေးကို ချိန်ကာ အားပါးတရဖိသိပ်ကာချလေတော့သည်။ “ အို … အို … အာ … အင်း … ကျွတ်… ကျွတ် … ကျွတ် ” မြသိန်း၏ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ နှင်းဝေ ခမျာ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ မွေ့ယာအတွင်းသို့ နစ်ဝင်သွားလိုက် ကော့တက်ကာလာလိုက်နှင့် ဖြစ်နေလေသည်။ ပြီးတော့လည်း နှင်းဝေတစ်ယောက် သူမ၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ပေါင်တံစင်းစင်း တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကားပေးထားရာ ပေါင်တွင်းကြောများပင် ထောင်ထနေလေသည်။ကြပ်ညပ်စီးပိုင်ကာ အသစ်အဆန်းဖြစ်နေသော အဖုတ်လေး၏အရသာကြောင့် မြသိန်းတစ်ယောက် ရမ္မက်စိတ်များပြင်းထန်ကာလာပြီး မချိတင်ကဲ ဖြစ်လာသည့်အဆုံး မြသိန်းသည် နှင်းဝေ ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ မှောက်ချကာ ကိုယ်လုံးလေးအားတင်ကြပ်စွာသိမ်းကြုံးပြီးဖက်လိုက်လေသည်။ နှင်းဝေကလည်ြးမြသိန်း ၏ကိုယ်ကိုပြန်ကာဖက်ထားလိုက်လေသည်။ ထိုအခါမှသူမ၏အသားလေးများတဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်ကို မြသိန်း သတိထားလိုက်မိပြီး ရင်ထဲတွင် နွေးကနဲဖြစ်သွားသည်။ထို့နောက် သူမ နို့တစ်ဖက်ကိုငုံကာ စို့လိုက်ပြီး ဖင်ကြွကာ အားရပါးရပင် ဆောင့်ကာလိုးလေတော့သည်။
မြသိန်း၏ ဆောင့်ချက်များကား ပြင်းလှသလိုသူမခမျာ ခေါင်းကို ဘယ်ညာလူးလှိမ့်ကာ ကြိတ်မှိတ်ခံနေရရှာသည်။ ဒါ့အပြင် သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကလည်း မြသိန်း ၏ကိုယ်လုံးကြီး သူမအပေါ်မှပျောက်ကွယ်သွားမှာကို စိုးရိမ်သည့်အလားအတင်းပင်ဖက်ကာထားလေသည်။သိပ်မကြာသောအချိန်ကာလ အတွင်းပင် နှင်းဝေ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့လာရာက နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဟလာပြီး “ ဟယ် … အ အ … အင့် အင့်….အွန် အွန်း … ” ညည်းညှူအော်ဟစ်ရင်း နှင်းဝေ တစ်ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကော့ကာကော့ကာ တက်သွားပြီး ဟင်း ကနဲသက်ပျင်းချကာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိအကြောများပြေလျော့သွားလေသည်။ ဝေ တစ်ယောက် တစ်ချီပြီးသွားပြီကို သိလိုက်ရသော မြသိန်း ကလည်း သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုတင်းကြပ်စွာတိုးဖက်လိုက်ရင်း လီးတန်ကြီးကို ဒစ်ပေါ်လာသည်အထိဆွဲကာဆွဲကာ ထုတ်ပြီး အားကုန်ဆောင့်ကာ လိုးလိုက်လေသည်။ မြသိန်း ၏အသက်ရှုသံများမှာလည်း ပြင်းထန်မြန်ဆန်လာပြီး ၁၀ချက်မျှ ဖိသိပ်လိုက်ကာ သူ၏အတံကြီးအား နှင်းဝေ ၏အခေါင်းလေးထဲသို့ တဆုံးဖိသွင်းလိုက်ပြီး ပူနွေးသော သုတ်ရည်များကို အားပါးတရ ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသည်အထိ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဖက်ကာ မှိန်းပြီးဇိမ်ယူနေကြပြီးနောက် မြသိန်းသည် နှင်းဝေ၏ဘေးဖက်သို့ ပက်လက်လှန်ကာလှဲချလိုက်လေသည်။
နှင်းဝေခမျာ သူမရတနာရွှေကြုတ်အတွင်းမှ ကျွတ်ထွက်သွားသော မြသိန်း၏အတံကြီးကြောင့် သူ့မရင်ထဲမှာ ဟာကနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး မြသိန်းကို မျက်လုံးလေးဝင့်ကြည့်လိုက်ရာ အိပ်ယာပေါ်တွင်ပက်လက်လှန်ကာ လှဲနေသော မြသိန်း၏ပေါင်ကြားတွင် အရှိန်မသေသေးဘဲ မိုးမျှော်ကာ ထောင်မတ်နေသော အတံကြီးကို မြင်လိုက်ရသည်။ ပြီးတော့အတံကြီးမှာ စိုရွှဲနေပြီးပေပွနေသောအရည်များကြောင့် တင်းပြောင်ပြီးအသည်းယားစဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။ နှင်းဝေ တစ်ယောက် မျက်တောင်တောင် မခတ်နိုင်ပဲ ကြည့်နေမိသည်။ ထိုနောက် တဖြည်းဖြည်းချင်း မာန်လျှော့ကာ ညှိူးကျသွားမှ သက်ပြင်းလေးချကာ မြသိန်း ကို ကြည့်မိသည်။ မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ကာ ဇိမ်ယူနေသော မြသိန်း သည်လည်းတစ်နေကုန်နီးပါးသောက်ထားသောအရက်ရှိန်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ကာမဂုဏ်ကိုခံစားပြီး အားကုန်သွားသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် ခဏအတွင်းမှာပင် ဟောက်သံပေးပြီးအိပ်ပျော်သွားလေသည်။နှင်းဝေ လည်း မြသိန်း မျက်နှာကို ငေးကြည့်ပြီးနောက် လေးကန်စွာဖြင့် အိပ်ယာပေါ်မှ မထချင် ထချင်ဖြင့်ထကာ ထိုင်လိုက်လေသည်။ နံနက်အိပ်ယာမနိုးပြီး မြသိန်း၏အကြည့်များ တိုင်ကပ်နာရီဆီသို့ ရောက်သွားသည်။ မနက် (၈) နာရီတောင်ထိုးသွားပြီပဲ။ မျက်လုံးကို ပေကလပ် ပေကလပ် လုပ်ပြီး ညကအကြောင်းတွေကို စဉ်းစားကြည့်မိတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာသည်ကို မတွေးတတ်တော့၊ သေချာသည်ကား သူနှင့် ဝေ တို့ အိပ်စက်သော နှစ်ယောက်အိပ်မွှေ့ယာကြီးပေါ်သို့ မြသိန်းတစ်ယောက် ရောက်နေချေပြီ။
မြသိန်း ကိုယ်ပေါ်တွင် လွှားထားသော စောင်ကိုခွာလိုက်သောအခါ အပေါ်အင်္ကျီကား မရှိ၊ သို့သော် အောက်ပိုင်းတွင်ပုဆိုးတစ်ထည်ကားစွပ်လျက်သား၊ မြသိန်း ကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်သည်၊ သူဝတ်လစ်စလစ် အိပ်ပျော်သွားသည်ကိုကား မှတ်မိလိုက်သည်။ ဝေ က သူ့ကို ပုဆိုးစွပ်ပေးခဲ့ရုံသာမက စောင်တစ်ထည်ကိုပါ ခြုံသွားပေးခဲ့သည်။ မြသိန်း ကုတင်ဘေးက စားပွဲပေါ်သို့ ကြည့်လိုက်တော့ အုပ်ဆောင်းအဝါရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကုတင်ပေါ်မှဆင်းပြီး အုပ်ဆောင်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ နန်းကြီးသုပ်တစ်ပွဲ၊ ကြက်ဥကြော်(၂)လုံး၊ ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ် ပြီးတော့ ကော်ဖီ ပန်းကန်တစ်စုံ တို့ကို တွေ့ရသည်။ မြသိန်း နန်းကြီးသုပ်ကြိုက်သည်ကို သိသော ဝေ က စီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အုပ်ဆောင်းဘေးတွင်လည်း ဓါတ်ဘူးအသေးတစ်လုံးနှင့် အကြီးတစ်လုံးကို မြင်လိုက်ရာ တစ်ဘူးက ကော်ဖီ သို့မဟုတ် ဟောလစ်၊ နောက်တစ်ဘူးက ရေနွေးကြမ်း ဖြစ်နေမည်ဆိုတာ မြသိန်း အတတ်သိနေလေသည်။ မြသိန်း ရေချိုးခန်းသို့ဝင်ကာ ရေကိုတဝြကီးချိုးပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အဝတ်အစားလဲကာ နန်းကြီးသုပ် နှင့် ကော်ဖီကို မနက်စာအဖြစ်စားလိုက်သည်။ စားပြီးတော့ ပန်းကန်များကို မီးဖုခန်းသို့ ယူလာခဲ့သည်။ အိမ်ဖေါ်ကောင်မလေး မိအေးကိုလည်းမတွေ့၊ ဈေးသွားနေတာဖြစ်မည်။ ဝေ တစ်ယောက်လည်း(ဂ) နာရီထိုးလျှင်ထွက်နေကြမို့ မတွေ့။ ဒါပေမယ့်လည်း မြသိန်း တစ်ယောက် ကြည်နူးနေမိသည်။
အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ကျော် ၃နှစ်အတွင်း ဝေ တစ်ယောက် သူ့အပေါ်တွင် ယခုလောက် ဂရုတစိုက်မရှိခဲ့။ ပန်းကန်များကို ဘေစင် ပေါ်သို့ တင်ထားပေးပြီးသောအခါ မြသိန်း ဧည့်ခန်းဖက်သို့ ထွက်လာခဲ့ပြီး သတင်းစာကိုဖတ်နေလိုက်သည်။ သတင်းစာဖတ်ရင်း မြသိန်းရဲ့စိတ်များ ညကချစ်ရည်လူးခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များဆီသို့ ပြန်တွေးမိသွားသည်။ ဝေ သည်အရင်ကနှင့်မတူ အတော်ပင်နုပျိုလန်းဆန်းကာ စွဲမက်စရာကောင်းလာသည်။ ကားစွင့်ကာနေသော သူမ ဖင်သားကြီးများသည် ယခင်ကလို အိတွဲတွဲမနေဘဲ မာတင်းကာအားရဖွယ် ပိုကောင်းလာသည်။ ပြီးတော့ကျပ်ညပ်ကာနေသော အခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာလည်း သူ့ အတံကြီးကို အတင်းပင်ရစ်ပတ်ကာနေသည့်အတွေ့ထူးကြောင့်အင်မတန်ပင်အရသာရှိလှသည်။ တဖန် ဝေ တစ်ယောက်ပြီးသွားသောအခါ သူမစောက်ခေါင်းက မြသိန်းအတံကို ဇတ်ကနဲ ဇတ်ကနဲ ဆောင့်ဆွဲကာ ညှစ်လိုက်ပုံကြောင့် မြသိန်း တစ်ယောက် ညကအတော်ပင်ထိန်းလိုက်ရသည်ကို ပြန်သတိရလာလေသည်။ တွေးရင်း တွေးရင်းဖြင့် မြသိန်း ဝေ့ ကို တမ်းတနေမိသည်။ သက်ုပင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်း ဝေ တစ်ယောက် ညနေစောစောပြန်လာလျှင်ကောင်းမည်ဟုတွေးနေမိသည်။ ထိုစဉ် အိမ်ရှေ့ သံဘာဂျာတံခါးကို သော့ဖွင့်သံကြားရသဖြင့် မြသိန်း လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မိအေး ဈေးမှပြန်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
မိအေး ဧည့်ခန်းထဲသို့ ဝင်လာသောအခါ သတင်းစာဖတ်နေသော မြသိန်း ကို တွေ့ရသဖြင့် “ ဟော … အကိုလေး နိုးနေပြီလား ” “ အေး …” “ မမနွယ် မနေ့က ဖုန်းဆက်တယ်၊အကိုလေး … ကိစ္စတွေမပြီးသေးလို့ နောက်ထပ် နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်ကြာမယ်လို့ ပြောတယ် ” ကြားလိုက်ရသောစကားကြောင့် မြသိန်းတစ်ယောက်နားတွေရှုပ်သွား၏။ မိအေးကတော့ သူ့စကားကို ဆက်ပြောနေ၏။ “ အဲဒါကို မနေ့ညကတည်းက ပြောုပမလို့ပဲ၊ ကျွန်မတို့ လင်မယားလည်း အံ့အားသင့်နေတာနဲ့ မပြောမိတာ၊ ဒီမနက် နှင်းဝေကို မေးတော့ အကိုလေး နိုးလာရင်ပြောပြလိုက်ပါဆိုလို့ ” မြသိန်း တစ်ယောက် ရှင်းသင့်သလောက်ရှင်းလာပြီဖြစ်၍ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်း ခုံလာလေသည်။ သူ၏အနားမှ သွားတော့မည့်ဟန်ပြင်နေသော မိအေးကို မြသိန်းက ခြောက်သွေ့သောလေသံဖြင့် လှမ်းမေးလိုက်လေသည်။ “ နင့် မမနွယ် က ဘယ်တုံးက သွားတာလဲ ? ” “ မနေ့မနက်ပိုင်းကတည်းက ထွက်သွားတာ အကိုလေး ” မြသိန်း၏ခေါင်းထဲတွင် မူးဝေလုမတတ် ဖြစ်သွားရသည်။ မိအေးက ချထားသော ဈေးခြင်းတောင်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ “ ဒါနဲ့ နှင်းဝေ ရော … မိအေး ” “ မနက်က အကိုလေးစားဖို့ နန်းကြီးသုပ် ပြင်ပေးပြီးကတည်းက သူ့သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ အလှူရှိလို့ သွားအုံးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်၊ ညနေမှပြန်လာမယ်လို့ ပြောသွားတယ် အကိုလေး ..”. “ သြော် … အေးအေး ….” မိအေးက ပြောပြီးသည်နှင့် မီးဖိုထဲသို့ ဝင်သွားလေသည်။
မြသိန်း တစ်ယောက်သာဧည့်ခန်းထဲတွင် ငိုင်ကာ ကျန်ခဲ့လေသည်။ ကြားလိုက်ရသော စကားများကို ပြန်ဆက်စပ်ပြီးသောအခါ မြသိန်း တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာုဖင့် ခေါင်းနားပန်းကြီးသွားလေသည်။ မြသိန်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်နေပြီး ရှေ့တွင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမည်ကိုကြိုတင်မတွေးရဲတော့ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ညက သူမူးမူးနှင့် ချစ်ရည်လူးခဲ့သူမှာ သူ၏ဇနီး နွယ်နွယ်ဝေ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦးတည်းသော ခယ်မချောလေးဖြစ်သူ နှင်းနှင်းဝေ ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ မြသိန်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ နွယ်နွယ်ဝေ သည် အသက်၂၆ နှစ်ခန့် ရှိပြီး နွယ်နွယ်ဝေ၏ ညီမဖြစ်သူ နှင်းနှင်းဝေ ကားအသက် ၂၀ ခန့်ပင်ရှိသေးသည်။သူမတို့၏ မိခင်မှာ လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်ခန့်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူမှာမူ ပြီးခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကမှ ဒီအိမ်မှာပင် ဆုံးပါးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ မြသိန်း နှင့် နွယ်နွယ်ဝေ တို့ အိမ်ထောင်ကျပြီးသိပ်မကြာချိန်တွင် နှင်းနှင်းဝေ သည် ရန်ကုန်တွင် အဆောင်ငှားကာ တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ် တက်နေချိန်လည်းဖြစ်သည်။ အိမ်ကြီးကလည်းကြီးသည့်အတွက် နွယ်နွယ်ဝေက သူမ၏အဖေနှင့် ညီမဖြစ်သူတို့အား အိမ်တွင်ခေါ်ထားချင်သည်ဟု ဆိုလာသောအခါ မြသိန်း ခေါင်းသာညိမ့်ခဲ့သည်။
နွယ်နွယ်ဝေ၏ ဖခင်ကြီးအား ဖခင်ကဲ့သို့ပင် လေးစားရိုသေပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ထို့အုပင် နှင်းနှင်းဝေအားလည်း ကားမောင်းသင်စေပြီး ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်အဆင်ပြေစေရန် ကားတစ်စီးပင်ဝယ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့လက်ထပ်ပြီး ၈) လခန့် ကြာသောအခါ တစ်စခန်းထလာသည်က နွယ်နွယ်ဝေ။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး သီးခြားလုပ်ချင်သည်တဲ့လေ။ မြသိန်း တစ်ယောက်ကတော့ ဇနီးဖြစ်သူ၏အလိုကိုလိုက်ကာ စိတ်တိုင်းကျစီမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လေသည်။သည်လိုနှင့် သူမတို့၏ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း နွယ်နွယ်ဝေ တစ်ယောက် ခါတိုင်းလိုအချိန်မှန် အိမ်သို့ ပြန်မရောက်။ ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ်ရှုပ်နေသော မြသိန်း ကလည်းသူမကို အချိန်ပြည့်လိုက်မကြည့်နိုင်၊ နွယ်နွယ်ဝေ ကလည်း မြသိန်း မေးမြန်းသောအခါ အလုပ်ကို အကြောင်းပြပြီး ဆင်ခြေတွေပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မတော့ လင်မယားနှစ်ယောက်စကား အချေအတင်စကားများခဲ့ကြပြီး မြသိန်း အိမ်မှထွက်သွားကာ စိတ်လေနေခဲ့သည်။ နွယ်နွယ်ဝေ နှင့် နှင်းနှင်းဝေ သည် အသက် ၆ နှစ်ခန့် ကွာသော်လည်း လုံးတူဒေါက်တူဖြစ်သည်။ သို့သော် အစ်မဖြစ်သူ နွယ်နွယ်ဝေက ကျောလည်လောက်ဆံပင်ရှည်နှင့် ဖြစ်ပြီး နှင်းနှင်းဝေ ကတော့ဂုတ်ဝဲဆံပင်နှင့် ဖြစ်သည်။ ညကအတော်ပင်မူးနေသောကြောင့် မြသိန်း သတိမမူမိသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ သူတို့ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်လုံးကလည်း မြသိန်းကို အကို ဟုသာခေါ်ကြလေသည်။မွေးချင်းမရှိသော မြသိန်းသည် နှင်းဝေကို နှမတစ်ယောက်လို ခင်မင်ခဲ့သည်ကားအမှန်ပင်။
ဖေါင်းကားတင်းနေသော တင်သားကြီးများ လမ်းလျှောက်လျှင် တဖြတ်ဖြတ်ခါပြီး တဆတ်ဆတ်တုန် သွားပုံများ၊ ငယ်မူငယ်သွေးအပြည့်ဖြင့် အလှသွေးတွေကြွယ်၊သောနှင်းဝေ၊ သူ သည်လောက်ထိန်းခဲ့ကာ စိတ်ရိုင်းများကိုတတ်နိူင်သလောက်ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်ချည်းပင်၊ သိုသော်လည်း တစ်ခါတစ်ခါတော့ အတူတကွ လက်ပွန်းတတီးနေလာသော သွေးမတော်သားမစပ် မိန်းမပျိုကိုကြည့်ကာ ရမ္မက်စိတ်များထကြွလာတတ်သည်။စဉ်းစားရင်းမနေ့ညက ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အတွေ့ကလည်း အလွန်တစ်ရာမှ မက်မောစွဲလန်းဖွယ်ရာကောင်းလှသည်။ ဝင်းဝါ စိုပြည်ကျစ်လစ်သော အသားအရည်လေးဖြင့် လှချင်တိုင်းလှနေသော နှင်းဝေ၏ ၀တ်လစ်စလစ်ပုံစံလေးကို ပြန်လည်ကာ မြင်ယောင်မိနေသည်။ ပြီးတော့ အမွှေးအမျှင်များပကင်းရှင်းကာ တင်းဖေါင်းနေသော မက်မောဖွယ်ရာကောင်းလှသည့် နှင်းဝေ၏ ရဲရဲနီနေသော မုန့်ပေါင်းရွှေကြုတ်…၊ ဒါတွေအားလုံး မြသိန်း စိတ်မျက်စိတွင် ပြန်လည်မြင်ယောင်လာပြီး မြသိန်း ၏စိတ်များသည် နှင်းဝေ အပေါ်သို့ စုပြုံကာရောက်ရှိနေလေပြီ။ ဧည့်ခန်းမှတိုင်ကပ်နာရီကြီးက ညနေ ၅နာရီ ထိုးသွားကြောင်းညွှန်ပြပြီးသွားခဲ့ပေပြီ။ စောစောလေးကပင် မိအေးလည်း သူမနေထိုင်ရာ ကားရုံးလေးသို့ ပြန်သွားခဲ့ချေပြီ။ မြသိန်း တစ်ယောက်တည်း ဧည့်ခန်းထဲတွင် စိတ်မပါ့တပါဖြင့် တီဗီအစီအစဉ်များကို ထိုင်ကာကြည့်နေသည်။ ခုချိန်ထိ နှင်းဝေ အိမ်သို့ ပြန်မရောက်လာသေး၊ ဘာဖြစ်လို့များလဲ ဟုတွေးကာ မြသိန်း စိတ်တွေပူနေမိသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကားတစ်စီးခြံတွင်းသို့ မောင်းဝင်လာသံကို ကြားလိုက်ရသည်။
မြသိန်း သူ၏ ထိုင်ခုံမှထကာ အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြင့် သူကြည့်နေသော တီဗီကို ပိတ်လိုက်လေသည်။ ပြီးမှ မဟုတ်သေးပါဘူးဟု သူ့ ကိုယ်သူဆင်ခြင်ကာ ပြန်ထိုင်နေလိုက်သည်။ မြသိန်း၏ စိတ်များသည်ယောက်ယက်ခတ်ကာနေလေသည်။ ခြံထဲသို့မောင်းဝင်လာသောကားသည် အိမ်ရှေ့ပေါ်တီကိုအောက်သို့ မမောင်းလာဘဲ ကားရုံဆီသို့ တန်းကာမောင်းဝင်သွားလိုက်သံကိုကြားနေရသည်။ထို့နောက်ကားစက်ရပ်လိုက်ပြီး ကားတံခါးပိတ်သံကို မြသိန်း ကြားလိုက်သည်။ မြသိန်းသည် သော့ခတ်ကာ ပိတ်ထားသော သံဘာဂျာတံခါးဆီသို့သွားကာ သော့အားကြိုတင်ဖွင့်ထားပေးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် သူ၏နေရာသို့သွားကာပြန်ထိုင်နေလိုက်လေသည်။သူပြန်ကာထိုင်လိုက်ပြီးစဉ်မှာပင် နှင်းဝေသည် သံဘာဂျာတံခါးရှေ့သို့ရောက်လာသည်။ သူမသည် မြသိန်းအား လုံးဝမကြည့်၊ သံဘာဂျာတံခါးကို တွန်းကာအတွင်းသို့ ဝင်လိုက်ပြီး မြသိန်းအား ကျောပေးကာ တံခါးကိုပြန်ပိတ်ကာ သော့ခတ်လိုက်သည်။ ယခုမှပင် နှင်းဝေ၏ နောက်ကျောအလှကို မြသိန်း သေသေချာချာစိုက်ကြည့်နေမိသည်။ နှင်းဝေ၏ သေးကျင်သောခါးအောက်တွင် တင်သားများသည် ဝိုင်းကာ ကားစွင့်၍နေသည်။တင်သားစိုင်များသည် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့်တင်းကာနေပြီး စွဲမက်ဖွယ် အလွန်တရာမှကောင်းလှသည်။တံခါးကို သော့ခတ်ပြီးသွားသော နှင်းဝေသည် လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ဖြင့် သော့ချိတ်သောနေရာသို့ လျှောက်ကာသွားပြီးသော့တံကိုချိတ်လိုက်၏။ ထို့နောက် သူမ၏အခန်းသို့သွားရန်အတွက် ဧည့်ခန်းကိုဖြတ်လျှောက်ရန်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်လေသည်။
နှင်းဝေ သည်မြသိန်း ထိုင်နေသောနေရာကိုမကြည့်သည့်အပြင် မျက်လွှာကိုချကာ ခေါင်းငုံ့ကာလျှောက်လာလေသည်။ မြသိန်း ထိုင်နေသောနေရာရှေ့မှ ဖြတ်သွားသောအခါတွင် မြသိန်းသည် သတိလက်လွတ်ဖြင့် ထိုင်ရာမှထကာ ရပ်လိုက်၏။ မြသိန်း ရင်ခုန်သံများကား တဒိန်းဒိန်းဖြင့် လူပျိုပေါက်တစ်ယောက်ပမာတုန်ယင်ကာနေလေသည်။ “ နှင်း … ဝေ …” စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ကာခေါ်လိုက်သည့်တိုင် မြသိန်း၏လေသံကား သိသိသာသာ တုန်ယင်ကာနေသည်။ “ … ရှင် …” မြသိန်းကို ကျော်ပြီး လေးငါးပေ အကွာသို့ ရောက်နေသော နှင်းဝေက သူမ၏ခြေလှမ်းများကို ရပ်ကာ ပြန်ထူးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။မြသိန်းကိုကား ကျောခိုင်းထားဆဲ၊ သူမ၏ ထူးသံလေးမှာ တကယ့်ကိုပင် တိုးတိုးလေး။ နှင်းဝေ ကိုခေါ်လိုက်ပြီးမှ မြသိန်း ပိုပြီးတုံတုံယင်ယင်ဖြစ်လာလေသည်။ နောက်ထပ်ပြောချင်သော သူ၏စကားလုံးများမှာလည်း သူ့နှုတ်မှမထွက်နိူင်ဖြစ်နေ၏။ နှင်းဝေကလည်း တံတွေး တစ်ချက်မျိုလိုက်ရင်း စိတ်ကိုတင်းကာနေရလေသည်။ “ ပြန် … ပြန်လာပြီလား …” စကားထစ်ကာ ထပ်သွားသဖြင့် မြသိန်း မှာ သူ့ကိုယ်သူ မကျေမနပ်ဖြစ်သွား၏။ မြသိန်း၏ အမေးစကားကို ကြားလိုက်သည့်အခါတွင် ခပ်တည်တည်ဖြစ်နေသော နှင်းဝေ ၏မျက်နှာသည် ပြုံးယောင်သမ်းသွား၏။ မြသိန်း သည် နှင်းဝေ ၏အနောက်တွင်ရှိနေသောကြောင့် နှင်းဝေ ၏အပြုံးကိုမမြင်လိုက်ရချေ။ “ ဟုတ်ကဲ့ … ” ပြောပြီးသည်နှင့် စောစောကထက် မြန်ဆန်သွက်လက်သောခြေလှမ်းများဖြင့် သူမ၏အိပ်ခန်းဆီသို့ လျှာက်လှမ်းကာသွားလေသည်။ထိုအခါ သူမ၏ တင်သားများသည် အစွမ်းကုန် တုန်ခါလှုပ်ယမ်းသွားပြီး ထိုအမြင်အာရုံသည် မြသိန်း၏ရင်ကိုစူးနစ်တိုးဝင်သွားလေသည်။
နှင်းဝေကား သူမ၏အိပ်ခန်းထဲသို့ ဝင်သွားချေလေပြီ။ မြသိန်းလည်း မျက်စိတဆုံးကြည့်နေပြီးနောက် လှည့်ကာထွက်လာခဲ့ပြီးသံဘာဂျာတံခါးအနီးတွင်ရပ်ကာ ပေါ်တီကိုအောက်ကိုငေးကြည့်နေသည်။ခဏမျှရပ်ပြီးသောအခါ မြသိန်း သည်စိတ်နှလုံးကို ဒုံးဒုံးချလျက် အိမ်အတွင်းဖက်သို့ လျှောက်ကာဝင်သွားလေသည်။နှင်းဝေ၏ အိပ်ခန်းရှေ့သို့ရောက်သောအခါ အိပ်ခန်းတံခါးသည်စေ့ကာမနေဘဲ နည်းနည်းခပ်ဟဟဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။အခြေအနေမဆိုးသဖြင့် မြသိန်းသည် တံခါးကို တွန်းကာဖွင့်လိုက်သောအခါတွင် မှန်တင်ခုံရှေ့တွင် ထမီရင်လျားဖြင့် ခေါင်းဖီးနေသော နှင်းဝေ ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ အိပ်ခန်းတွင်းသို့ ခြေနှစ်လှမ်းလောက်ဝင်ပြီးသောအခါတွင် နှင်းဝေ ၏အသံလွင်လွင်လေး စတင်ကာပေါ်ထွက်လာသည်။ “ အကို နှင်းဝေကို ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ ? နောက်မှ အပြင်မှာပြောမယ်လေ …” မြသိန်းလည်း ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲ နှင်းဝေကိုယ်ခန္ဓာလေးကို ငေးကြည့်ပြီး နှင်းဝေ၏ကုတင်ပေါ်သို့ ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ “ ဟို … ဟို … နှင်းဝေ … ညက … အကိုလေ …” ​ သူ့စကားမဆုံးခင် နှင်းဝေ ထိုင်ခုံပေါ်မှဆတ်ကနဲထကာ မြသိန်းဖက်သို့လှည့်လိုက်၏။ နှင်းဝေ၏ ဖြူနုသောမျက်နှာကား ပန်းသွေးရောင်အတိ။ “ ဘာလဲအကို … နှင်းဝေမှန်း မသိလို့ပါလို့ ပြောမလို့မဟုတ်လား … ” ထိုသို့ပြောလိုက်ရင်း နှင်းဝေသည် မြသိန်း ထိုင်နေရာကုတင်ရှေ့သို့ ရောက်လာလေသည်။
မြသိန်း စကားကိုမဆက်နိုငင်ပဲ နှင်းဝေ၏ ရင်လျားထားသော ကိုယ်လုံးလေးကိုသာ ခပ်စိမ်းစိမ်းစိုက်ကြည့်နေလေသည်။ ထမီကိုရင်လျားထားသဖြင့် ဝင်းမွတ်မို့မောက်နေသော ရင်ညွန့်အလှကို အထင်းသားမြင်နေရသည်။ထမီကို တင်းတင်းစည်းထားသဖြင့် လုံဝန်းကာ ငွားစွင့်လှသော ရင်သားအလှကြောင့် မြသိန်းအကြည့်တို့သည် ထိုနေရာက မခွာနိူင်ဖြစ်နေရသည်။ မြသိန်း စိတ်ကိုတင်းကာ သူ့ရှေ့တွင်ရပ်နေသော နှင်းဝေ ပခုံးကို လှမ်းကာကိုင်လိုက်လေသည်။ နှင်းဝေ ကလည်းရုန်းဖယ်ခြင်းမပြု။ “ မဟုတ်ပါဘူး … နှင်းဝေ ၊အကို နှင်းဝေမှန်း သိရက်နဲ့ချစ်ခဲ့တာပါကွယ် … ” စကားအဆုံးမတော့ ကုတင်စောင်းတွင်ထိုင်နေသော မြသိန်းသည် သူ၏ရှေ့နားတွင် ကပ်လျှက်ရပ်နေသော နှင်းဝေ ကိုယ်လုံးလေးကို လှမ်းဆွဲယူကာဖက်လိုက်လေသည်။ နှင်းဝေ ကိုယ်လုံးလေးသည် အလိုက်သင့်ပင်ပါလာပြီး မြသိန်း၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ ရာက်သောအခါ သူမ၏မျက်လွှာကို ချလိုက်ပြီး မျက်နှာလေးက အပေါ်သို့မော့ကာနေပြီး နှုတ်ခမ်းလေးနှစ်လွှာက ပွှင့်တော့မယောင်ယောင်၊ မြသိန်း လည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ နှင်းဝေ ၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိကပ်စုပ်နမ်းလိုက်ရာ နှင်းဝေ ၏လက်များကလည်း မြသိန်း ကိုဖက်တွယ်ရင်း ပြန်လှန်စုပ်နမ်းခြင်းဖြင့် တုန့်ပြန်လေသည်။ မြသိန်း လက်များကလည်း ဝက်မြီးကဲ့သို့ပင်၊ အငြိမ်နေသည်မရှိပဲ နှင်းဝေ ၏တစ်ကိုယ်လုံးအား စုန်ဆုန်ကာ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ အထူးသဖြင့်တော့ တင်းရင်း စွင့်ကားကာနေသော နှင်းဝေ ၏ တင်သားနှစ်ခြမ်းကို အားပါးတရ ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ နှင်းဝေ ကလည်း မြသိန်းနှုတ်ခမ်းတွေကို စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် အတင်းကိုပင် ဖိကပ်စုပ်နမ်းနေသည်။
ပြီးတော့လည်း သူမသည် မြသိန်း ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို တိုးကာဖက်လာပါတော့သည်။မြသိန်း၏ လက်တစ်ဖက်က နှင်းဝေ၏ တင်သားကြီးနှစ်ခုကြား ကိုလက်စောင်းဖြင့် ထမီပေါ်မှ ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ရာ နှင်းဝေ၏ ကားအယ်ကာနေသော ဖင်သားကြီးများမှာ တလှိမ့်လှိမ့်ဖြင့် လှုပ်ကာနေလေသည်။ ထို့နောက် မြသိန်း လက်က သူမရှေ့ပိုင်းသို့ ရွေ့ပြောင်းကာ ပေါင်ရင်းဆီသို့ တိုးဝင်ကာ သူမ၏အင်္ဂါဇာတ်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်လေရာ နှင်းဝေ ခါးကလေးမှာ ကော့ကာတက်သွားပြီး မာန်ဖီနေသော မြသိန်း ၏ အတံကြီးနှင့် သူမ၏ ချပ်ရပ်ကာနေသော ဝမ်းပျဉ်းသားတို့မှာ နွေးထွေးစွာဖိကပ်မိကြသည်။သူမကို ထောက်ထားသော ပူနွေးနေသော မြသိန်း အတံ အထိအတွေ့၊ အင်္ဂါဇာတ်အား လက်ဖြင့်ကလိပေးနေမှု၊ ဖင်သားကြီး နှစ်ခုအားဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ပေးမှုများကြောင့် နှင်းဝေ ကာမဇောများသည် ဒီရေလှိုင်းများကဲ့သို့ တလှိမ့်လှိမ့်တက်လာပြီး ခံစားရခက်လာသောကြောင့် ရင်ထဲတွင်ပင် မွန်းကျပ်ကာလာရတော့သည်။ နှင်းဝေသည် သူမ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာအား မြသိန်း၏ နှုတ်ခမ်းများဆီမှ ပြွတ်ကနဲ နေအောင် ဆွဲကာခွာလိုက်ပြီး မြသိန်း၏ မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပြီး သူမ၏လက်ချောင်းလေးများဖြင့် မြသိန်း ၏ အင်္ကျီကြယ်သီးများကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ကာပေးနေသည်။
ကြယ်သီးများ အားလုံးပြုတ်သွားသောအခါ အင်္ကျီကိုချွတ်ပေးလိုက်သည်။ပြီးနောက် နှင်းဝေ ကိုယ်လုံးလေးကို အိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲချလိုက်သည်။ ထိုအခါမှ မြသိန်း သည် သူမ၏ ရင်လျှားထားသော ထမီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ နှင်းဝေမျက်လုံးလေးများမှိတ်လိုက်ပြီး ခါးလေးကိုကြွပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ မြသိန်းက နှင်းဝေ အ၀တ်မပါသောကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်ပေါ်သို့ ကန့်လန့်ဖြတ်ကာတင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဝင်းပြောင်ဖြူဥနေသော သူမ၏ဖင်သားကြီးများကို ကုတင်စောင်းတွင်နေသားကျအောင်တင်လိုက်ပြီး သူ၏ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်စဉ်မတွင်တော့ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်ထားသော နှင်းဝေ ၏ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော နှုတ်ခမ်းများမှ တိုးလျညင်သာသော စကားသံလေးထွက်လာလေသည်။ ​ “အကို … နှင်းဝေကို မညာနဲ့နော် …” “ မညာပါဘူး … နှင်းဝေရယ်၊ အကို နှင်းဝေကို အစောကြီးကတည်းက ချစ်နေတာပါကွယ် … ” “မဟုတ်ဘူး အကို … နှင်းဝေ ပြောတဲ့ ညာ မှာ ဟ ထိုး ပါတယ် အကိုရဲ့ …” လူလယ်မလေး နှင်းဝေ ပင်တည်း …. ပြီးပါပြီ။